China 5L ọhụrụ oxygen concentrator digital ngosi na nebulizer na-adị ọcha mkpu factory na-emepụta | Konsung
Ngosi Ngosi na nleta ndị ahịa
KSOC Usoro Oxygen Concentrator
Igwe na-ekpuchi ikuku oxygen
KSN Usoro Ngwunye Oxygen Ọhụrụ
Obere Oxygen Concentrator
Multi-parameters Ndidi Nyochaa
Dị Oké Mkpa ịrịba ama Ndidi Nyochaa
Usoro Nyocha nke Central
Portable Type mmiri Machine
Nrụgide oru Dịrị igwe
Igwe na-ejide aka
POCT Diagnostic Ngwaahịa
Nyocha Ọbara Ọbara Ọbara
Oge nyocha Fluoroimmunoassay nyocha
Akọrọ Biochemistry nyocha
Ngwaahịa ọgwụgwọ ọrịa
Oxygen Concentrator Ngwa
COVID-19 Nnwale Ngwa ngwa
High eruba 10L oxygen concentrator elu nsogbu mmepụta adabara ventilator Cpap na Bipap na homefill
Aurora-12 12.1-inch nnukwu ihuenyo nyochaa nke nwere nnukwu font na usoro ngụkọta ọgwụ maka ICU
Ejiji mkpisiaka Pulse Oximeter CE & FDA na Bluetooth na App smart health monitor
5L ọhụrụ oxygen concentrator dijitalụ ngosi na nebulizer na ịdị ọcha mkpu
Ekwentị mkpanaka na-ahụ maka nlekọta ahụ ike maka ọgwụgwọ na ahụike e-clinic
♦ America USA PSA technology, na-enye ọdịdị oxygen
France mbubata myọ molekụla myọ
♦ Superior oxygen nebulization nkà na ụzụ
♦ Nnukwu ihuenyo na ngosipụta na ịdị ọcha ngosi
Obere obere ma dị mma maka iji ụlọ
Ihe ikuku oxygen
♦ Nabata igwe eji eji ọla kọpa enweghị mmanụ nke nwere ike ịrụ ọrụ ụbọchị 24 kwa ụbọchị. Nọrọ jụụ na oru oma. Onwem na ekpo oke ọkụ nchedo ngwaọrụ na mmiri ujo absorption imewe, com pressor ọrụ ndụ bụ ogologo.
♦ Maka agadi: ịgbatị ndụ, imeziwanye ọgụ, igbochi ọrịa, ọgwụgwọ oxygen. Nwoke agadi dị ike ike na-agbada ngwa ngwa; Vitfọdụ vitals dị ka obi, ụbụrụ, na akụrụ, umeji ji nke nta nke nta jụ. Oxygen uptalking ga-eme ka ụkọ oxygen na-akpata site na Nrụ Ọrụ Ahụ na-egbochi ma na-echekwa akụkụ ahụ ọ bụla n'ọnọdụ dị mma, na-egbochi ọrịa iji nọgide na-enwe ahụ ike ma na-echekwa ike.
♦ Maka ụmụ nwanyị na-acha ọcha: nlekọta anụ ahụ, mmezi nri anụ ahụ na ekwedo na mbelata ọnọdụ ahụike. Oxygen elu na-ewere nwere ike inyeaka ụjọ na mgbakasi mmetụta sub ahụ ike, wdg. Asingba ume, bilie vitality. Naghachi ma melite ahụ ike gị site n'ọrịa ọfịs, dịka ike gwụrụ, na-enwe oke nhịahụ, agụụ na-agụ gị.
♦ Maka ụmụ nwanyị dị ime: igwe ikuku oxygen a bara uru nye ndi nwanyi ma nyere aka na mmepe nwa ebu n'afọ. Ọtụtụ oxygen na-a takingụ ga-enyere ụmụ nwanyị aka ịkwalite ma ọ bụ melite mgbasa ọbara, ị ga-ewepụ nsị na melanin iji mee ka akpụkpọ gị dịna-edozi na nwata. Oxygen elu ịnara nwere ike inyere nwa ebu n'afọ aka inwetakwu ikuku oxygen iji tolite ahụike ma ghọọ “Oxygen Baby”, ka ọ nwee uru pụta ụwa n’oge ime.
♦ Maka ọchụnta ego: Igwe ikuku oxygen na-eme ka ahụ erughị ala na nke igwe na-atụrụ ndụ, na-eme ka ikike anụ ahụ dịkwuo mma, na-ebelata ọnọdụ ahụike na-arụ ọrụ nke ọma. Mee ka usoro nchịkwa ahụ dịkwuo mma, gbasie ike ma melite ogo ndụ ma ọ bụ mgbake.
♦ Maka Mụ akwụkwọ: oxygen concentrator generator na-eme ka ncheta dị mma, na-enye ume ọhụrụ ma na-ebelata ike ọgwụgwụ uche. Bụrụ anyị ga-eji were wepụ 25% oxygen nke ahụ niile. Mgbe ị na-amụ ogologo oge, ịchọrọ ikuku oxygen na-ewe oge ma nwee ike inyere gị aka melite ikike icheta na ịmụ ihe.
♦ Maka Ndị ọrụ: ịhapụ ike ọgwụgwụ, ume ọhụrụ ma nwekwuo ikike anụ ahụ.
♦ Maka Ndị ọrịa: Igwe ikuku oxygen a na-amụba inyeaka ọgwụgwọ nke Cardio - ọrịa ụbụrụ / ọrịa COPD & Cardiovasalar, ọrịa shuga na ọrịa iku ume.
Alarm Ike mkpu mkpu, bufee nchedo, High / Low nsogbu mkpu, Okpomọkụ mkpu, Error koodu na-egosi, Nebulizer, Oxygen ịdị ọcha mkpu
♦ Model: KSN-5 Ọhụrụ
Xy Ọdịdị Oxygen: 93 ±3%
♦ Ọsọ Na-asọba: 1-5L
♦ Volta Input: 220V / 110V
Ise isezụ: 45dB
Nrụpụta Npụta: 30-70kPa
♦ Ike: 350W
♦ Arọ: 23.3kg
♦ Nha: 378mm × 242mm ×510mm
Nke gara aga: 3L homecare Oxygen concentrator nnukwu ihuenyo na-adị ọcha mkpu na nebulizer
Osote: 3L concentrator oxygen streamline imewe na USA technology mmanụ free Compressor
Ebe obibi Oxygen Concentrator
3L homecare Oxygen concentrator nnukwu ihuenyo na ...
Debanye aha maka nyocha anyị